(tonga teto avy amin'ny Madagascar)
teny malagasy, izay teny iraisana manerana ny nosy; izay mizara fototeny maro amin'ireo teny Barito ary ny teny Dayak izay tenenina ao atsimon'ny Bôrneô toa ny fiteny ma'aniany izay teny be fitovizana indrindra amin'ny fiteny malagasy.
fomban-drazana iraisana amin'ny aostrônezianin'i Taiwan, nosin'i Pasifika, Indônezia, Filipina ary Zelandy Vao, toa ny fambolena saonjo, akondro, voaniho, fary; fampiasana zavamaneno toa ny sodina (malay: suling) ny valiha, sns.
Tonga avy amin'ny morontsiraka atsimo atsinanan'ny nosy ny olona voalohany, na dia mety tonga avy tany avaratra aza ny sasany. Tam-pahatongavana, nanao ny tavy no nahafahan'ny mponina voalohany namboly, tamin'ny alalan'ny fandringanana ny ala teny amin'ny morontsiraka.
Tsy fitenin'ny mpanjanatany ny teny anglisy ka tsy mitovy amin'ny teny frantsay ny lanjany sy ny fianjadiany. Kanefa noho ny fitiavan'ny filoha taloha Marc Ravalomanana ny fiteny anglisy sy noho ny fianjadiana eran-tanin'ny firenena toa i Etazonia, ny fianjadiana ara-paritr'ireo firenen'i Afrika sy ny firenena lehibe aty amin'ny Ranomasimbe Indianina ary koa ny fiparitahan'io fiteny io eran'izao tontolo izao, dia nataony ho teny ôfisialy ny teny anglisy tamin'ny taona 2007 miaraka amin'ny teny frantsay sy ny teny malagasy ary lany tamin'ny fitsapahan-kevi-bahoaka. Tamin'izany taona izany, latsaky ny 5 % no lanjan'isan'ireo Malagasy afaka mifandray amin'io fiteny io. Tamin'ny nahatongavan'i Andry Rajoelina teo amin'ny fahefàna, dia nesorina tsy ho teny ôfisialy intsony ny teny anglisy.
Ny ankamaroan' ny mponina malagasy mipetraka eo anivon-tany sy eny amin'ny morontsiraka atsinanana dia mety avy any Azia, ary ny ankamaroan'ny mponina mipetraka any avaratra dia mety avy any India na avy any Afrika Avaratra. Araka ny fandinihana natao vao haingana, mety tsy nisy olona nipetraka teto Madagasikara raha tsy tany amin'ny taonjato faha-10 tany ho any. Teo ny Aostrôneziana (avy any Indônezia) no mety tonga. Ankehitriny dia misy mponina malagasy mipetraka any amin'ny tamba-nosin'i Kômôro (Moheli, Mayotte, Anjouan) sy any La Réunion.
Izao ny fitombon'ny isdan'ny mponina teo anelanelan'ny taona 1950 sy 2010:
Ny Antesaka na Antaisaka na Tesaka dia foko iray ao atsimo atsinanan'i Madagasikara. Ao aminny distrikan'i Vangaindrano, faritra Atsimo-Atsinanana, no betsaka azy ireo. Ny faritra onenany dia eo anelanelan'i Mananivo ao avaratra, Itomampy sy Ionaivo ao andrefana, ary Lavibola ao atsimo. Tanàna lehibe ao aminy dia i Vangaindrano sy i Midongy Atsimo.
Ny Antambahoaka dia foko iray ao atsimo atsinanan'i Madagasikara, eo anelanelan' i Sakaleona sy Namorona. I Mananjary no tanan-dehibe any.
Ny Antandroy dia foko ao amin'ny tendron'i Madagasikara atsimo indrindra monina amin'ny tany eo anelanelan'ny ony Menarandra ao andrefana sy Mandrare ao atsinanana ary ny havoana Vohimainty ao avaratra.
Ny Bezanozano dia foko ao amin'ny tany lemaka manodidina an'i Mangoro, voafaritry ny taniny onenan'ny foko Sihanaka ao avaratra, ny Betsimisaraka ao atsinanana, ary ny Merina ao andrefana. Ireto ny tanàn-dehibe ao: Moramanga sy Beparasy ary Anjiro.
Voazara telo ny vohontanin'i Madagasikara. Any atsinanana dia misy lemaka tery kely haavo misy ny lakandranon'ny Pangalana manana toe-tany be orana any avaratra hatrany atsimo. Ny eo anivon-tany indray dia misy ny ankabeazan'ny mponin'i Madagasikara ary koa ny renivohi-pirenena Antananarivo; ny toe-tany eo amin'ny faritra anivo dia mangatsiaka amin'ny andro ririnina ary matimaty na mafana rehefa andro fahavaratra amin'ny volana Desambra; ny rotsak'orana eo amin'ny faritra anivo dia antonontonony; ny havoana dia maka enimpolo isan-jaton'ny velarantanin'i Madagasikara. Ny faritra andrefana dia manana toe-tany maina sady mafana mandavantaona; ny hakitroky ny mponina any amin'ny faritra andrefana dia anisan'ny kely indrindra eto Madagasikara.
Tropikaly ny toetany amin'ny morontsiraka, ara-pehibe izy any atsinanana, tropikaly maina izy any amin'ny morontsiraka andrefana sy atsimo, ary tropikaly mangatsiaka izy any ampivoany. Ny Anticyclone ny Ranomasimbe Indianina no mampisy ny alizay atsimo atsinanana, mihisaka araky ny fizaran-taona io alizay io.
Ny fivavahana eto Madagasikara dia ahitana ny fifanojoan'ny fivavahana maro, ka ny tena be mpanaraka dia ny fivavahan-drazana sy ny fivavahana kristiana ary ny finoana silamo. Hita koa ny fivavahana hafa toy nybahaisma sy ny hindoisma.
Miantso an'Andriamanitra na Zanahary koa ny Malagasy mandala ny fivavahan-drazana rehefa misy zavatra ataony. Mihoatra ny 52 %n'ny mponina no manaraka ny fivavahan-drazana izay fivavahana manantitra ny fifandraisan'ny velona sy ny maty (Razana). Tsy misaraka amin'ny tontolon'ny velona ny tontolon'ny Razana izay ivavahana ka izany no ahitana Malagasy manao fomba isan-karazany amin'ny fanamboaram-pasana sy amin'ny fanatanterahana ny famadihana amonosan-damba indray ny maty sy andevenana azy indray aorian'izay. Any Imerina sy any Ibetsileo no tena ahitana ny fanaovana famadihana. Izany fivavahana amin'ny razana izany dia matetika miaraka amin'ny fanandroana sy ny sikidy.
Ny 41 %n'ny Malagasy dia Kristiana ka ny tena misongadina, raha amin'ny lafiny isa, dia ny Katôlika sy ny Prôtestanta. Mandray anjara amin'ny raharaham-pirenena ny fiangonana kristiana malagasy ka ny fantatra indrindra amin'izany dia ny Fiombonan'ny Fiangonana Kristiana eto Madagasikara (FFKM). Hita ao koa ny Fiangonana ortodoksa, ny Fiangonan'i Jesoa Kristy ho an'ny Olomasin'ny Andro Farany, ny Vavolombelon'i Jehovah, ny Fiangonana Adventista Mitandrina ny Andro Fahafito sy ny hafa koa.
Ny 1 %n'ny mponin'i Madagasikara dia Miozolmana ka Kômôriana sy Karàna (Indiana sy Pakistaney). Ny ankamaroany dia any amin'ny tapany avaratra-andrefan'ny Faritanin'i Mahajanga sy any amin'ny Faritanin'Antsiranana.
Vitsy ny Hindoa eto Madagasikara ka ny ankamaroany dia mpandraharaha moninana eto Madagasikara efa hatramin'ny taranaka maro nifandimby.
Isan'ireo fivavahana misy eto Madagasikara ny finoana bahay. Tonga teto Madagasikara tamin'ny taona 1953 ny mpisava lalana bahay ka niteraka ny fiovam-pinoan'ny Malagasy sasany ho amin'izany finoana izany.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Madagasikara&oldid=1037075"
Voaova farany tamin'ny 1 Septambra 2021 amin'ny 19:33 ity pejy ity.